Lifestyle Archives - Page2of3- Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle > All Articles > Lifestyle
သင့်အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်လဲ ?0293
Usman Ghani April 3, 2020 12:01 pm April 7, 2020
အရောင်ကာလာအမျိုးမျိုးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် … ဒါ့အပြင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်များက မိမိရဲ့ အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်နိုင်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်ပူပန်သူများရှိကြပါတယ် … ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဉာဏ်စမ်းပဟေဠိလေးတွေက သင့်အသားအရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အရောင်က သင့်အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့ …
နေ့စဉ် သင့်ရဲ့အသားအရည်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ ….0307
အသားအရည်ကျန်းမာကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာ အလှကြိုက်တတ်တဲ့သူ ကိုကိုမမတွေရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ … ဒီနေ့မှာတော့ မင်မင်က ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရည်ကောင်းမွန်အောင်၊ ကျန်းမာအောင်နေ့စဉ်ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် … အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကို ရရှိနိုင်မို့ဆိုရင် အတိအကျနဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို သေချာစွာအသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ် …အလှကုန်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း …
ဖုန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သတိထားရမည့် အချက်တွေကို သင်ဘယ်လောက်သိလဲ?0358
Usman Ghani April 3, 2020 9:03 am April 6, 2020
သင်၏ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုကို သတိထားပါ။ ယခု အခါစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူဦးရေ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ဒီဂျစ်တယ် ခြိမ်းခြောက်မှုအသစ်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ဥပမာ – အထိခိုက်မခံတဲ့ ဒေတာတွေကို ခိုးယူတာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် တွေကိုရယူတာ၊ ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ သင့်ဖုန်းကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိလဲ ?0380
Usman Ghani April 2, 2020 9:28 am April 2, 2020
‌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပြီး ပြန်ကြည့်လျှင် အနော်ရထာဘုရင်မှ နိုင်ငံကိုစုစည်းပြီး ပုဂံတွင် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၁၁ ရာစု အစောပိုင်းမှာ နိုင်ငံ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပုဂံနိုင်ငံတော် အကျယ်အဝန်းမှာ ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မီနန်တောင်ကြားတခုလုံးဖြစ်ပြီး …
သင်က ဘယ် Avengers နဲ့ တူနိုင်မလဲ ?0580
Usman Ghani April 2, 2020 8:11 am April 7, 2020
သင့်ရဲ့ ဝါသနာကို အခုပဲရှာဖွေလိုက်ကြရအောင်…. 1 3003
Usman Ghani April 1, 2020 10:06 am April 7, 2020
ဝါသနာနဲ့ အိပ်မက်တွေဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေပါ …. သင့်ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ အရာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး သင့်ရဲ့ဝါသနာတွေကို ခန့်မှန်းပြောဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. .. ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အရာတွေနဲ့ ထပ်တူကျသလားဆိုတာ ပုံလေးတွေကို ရွေးချယ်လိုက်ကြရအောင် …
ဆီကုန်စရာလည်းမလို ညှော်နံ့လည်းမနံတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ DSP Air Fryer0257
Usman Ghani March 11, 2020 8:59 am March 11, 2020
😍 အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ဆီကုန်စရာလည်းမလို ညှော်နံ့လည်းမနံတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ DSP Air Fryer 😍 အကြော်တွေကို အပြင်က ဝယ်စားပြီး ဆီတွေမသန့်တော့ ရောဂါတွေရမှာပေါ့… ဒီတော့ DSP Air Fryer လေးကို …
ခေါက်ရ ဖြန့်ရလွယ်ကူတဲ့ Sofa Style Folding Bed0268
🖥 ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အလွယ်တကူသုံးလို့ရမယ့် ခေါက်စားပွဲများ 🖥0247
Usman Ghani February 10, 2020 11:05 am February 14, 2020
ဒီတစ်ခါမှာတော့ နေရာသိပ်မယူဘဲနဲ့ အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေစေမယ့် ခေါက်စားပွဲလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ။ 💁🏻 အထူးသဖြင့် နေရာသိပ်မကျယ်တဲ့ တိုက်ခန်းတွေမှာတွေ စားပွဲထားဖို့နေရာက အတော်ရှာရခက်ပါတယ် ။ အဲ့လိုမျိုးဆို စာလုပ်၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ ‌ခေါက်စားပွဲလေးတွေကို ကိုယ့်အိပ်ယာပေါ်မှာ အလွယ်တကူခင်းပြီး …
ခပ္မိုက္မိုက္္ ဖုန္း၊တက္ပလက္၊ တျခား ပစၥည္းေတြကုိ Sale ခ်တုန္း ဝယ္ၾကမယ္။0275
Usman Ghani April 20, 2018 10:50 am May 3, 2018
Shop ကလုပ္တဲ့ salesေတြက မတရားမိုက္တာကို လူအမ်ားသိၾကပါတယ္ေနာ္။ အခု shop ကေနျပီးလုပ္ေနတဲ့ Thingyan Sale က23 ရက္ေန႔ရွိေနပါေသးတယ္။ 750က်ပ္ကေနစျပီး ဝယ္လုိ႔ရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြပါပါတယ္။ လက္သည္းနီေတြ၊ ဖက္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြကုိ အရင္ blog မွာေျပာျပီးျပီျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ …